१ बर्ष पहिले घोषणा, सुटिङ सुरु हुने कहिले कहिले ? « Mazzako Online
१ बर्ष पहिले घोषणा, सुटिङ सुरु हुने कहिले कहिले ?
नेपाली फिल्मको घोषणाको प्रक्रिया हेर्ने हो भने अहिले २ प्रकारको देखिएको छ । एउटा, सुटिङ सुरु हुनुभन्दा एक बर्ष अगाडि नै फिल्म बन्दै छ भनेर घोषणा गर्ने । अर्को, सुटिङ हुँदैछ भनेर घोषणा गरेकै दिनबाट सुटिङमा सुरु गर्ने ।
फिल्म ‘कृ’ बन्दैछ भनेर घोषणा भएको करिब १ बर्षपछि मात्र यसको छायांकन सुरु भएको थियो । यस्तै, निर्देशक मुस्कान ढकालले फिल्म ‘समर लभ’ बन्दैछ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि धेरै महिना भैसक्यो । तर, यो फिल्मको छायांकन अझै सुरु भएको छैन ।
यता, फिल्म ‘ग्याङस्टार ब्लूज’को पनि घोषणा गरिएको करिब ८ महिनापछि छायांकन गरिएको थियो । कतिपय फिल्म त घोषणा गरेर नै बन्दैनन् । तर, कतिपय निर्माताहरु कलाकारले लामो समय लिने भएकाले घोषणा गरेर कलाकारको समय कुरेर बसेका हुन्छन् ।